कोरोना फोबियाले अस्पताल जाने बढे
काठमाडौं, २३ फागुन। कोराना संक्रमणको आशंकामा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्डबाट भागेका व्यक्तिमा कोरोना फोबिया भएको चिकित्सकले बताएका छन्। आफूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको बताउँदै अस्पताल पुगेका उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सामान्य देखिए पनि बारम्बार आफूलाई कोरोना भएको दाबी गरेपछि काउन्सिलिङ गरेर आइसोलेसनमा राखेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले बताए। काउन्सिलिङकै क्रममा उनी कोरोनाबाट निक्कै नै त्रसित रहेको पनि उनको भनाइ छ।
दक्षिण कोरियाबाट आएका ती व्यक्तिमा कोरोनाको त्रास अत्याधिक मात्रामा पाइएको पनि उनले बताए। मोबाइल ट्र्याकिङ गर्दा विराटनगरमा फेला परेका ती व्यक्तिको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। प्रवक्ता बास्तोलाका अनुसार अन्य मूलुकबाट नेपाल भित्रिएकाहरु कोरोनाको त्रासमा अस्पताल जाने क्रम बढ्दो छ। टेकु अस्पतालमा दैनिक त्यस्ता बिरामीको संख्या बढीरहेको पनि उनले बताए।
आशंकामा अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या अत्याधिक रहेको पनि उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय मौसम परिवर्तनसँगै चलेको फ्लुका कारण पनि सर्वसाधारणमा कोरोनाको त्रास बढेको चिकित्सकको भनाइ छ। यसैबीच कोरोनाको आशंकामा टेकुस्थित अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएका फ्रेञ्च नागरीकसहित ३ जनालाई बिहीबार डिस्चार्ज गरिएको छ। उनीहरुको र्‍याल परीक्षण नेगेटिभ देखिएपछि डिस्चार्ज दिएको डा. बास्तोलाले बताए। अन्य दुई जना शंकास्पद विरामी भने आइसोलेसनमा भर्ना भएका छन्। यस्तै, अब आइसोलेसन वार्डमा नेपाल प्रहरीका साथै मनोवैज्ञानिक परामर्शदातालाई पनि खटाइने भएको छ।